PSJTV | बिच्छी लड्दैछन, सम्मृद्दीको सपना स्वपन्दोष हो
बिच्छी लड्दैछन, सम्मृद्दीको सपना स्वपन्दोष हो
भारत देखाएर चुनाव जित्नु सजिलो छ। भारत रिझाएर सत्ता टिकाउन गाह्रो।
आइतबार, २४ असार २०७५ राजेश मिश्र
कुराको आरम्भ एउटा जातक कथाबाट गरौँ। एउटा बिच्छी ब्याकूल थियो। जन्मजात दंशी उसलाई बर्षाको भेलले नदीको बहावमा आएको तीब्रताले चिन्तित तुल्याएको थियो। बिच्छीहरु पौडिन जान्दैनन्। तर डस्नु उनीहरुको मौलिक अनि बंशाणुगत गुण, स्वभाव वा चरित्र जे भन्दा पनि हुन्छ। कथा गजबको छ। बिच्छीको एउटा अभिन्न मित्र पनि थियो। भ्यागुतो। भ्यागुतो पानीको प्रखर परिचारक हो।
चिन्तित बिच्छीको मुखमा पुगेर भ्यागुतोले भन्यो, "के को चिन्ता? तँ मेरो पिठ्यूँमा राम्ररी समाएस, नदि त म पार गरिदिन्छु नि।" बिच्छी भ्यागुताको ढाडमा सवार भयो। उसले बिच्छीलाई नदि पार गरायो। बिच्छी तटमा उत्रिन पाएको के थिएन, उसले भ्यागुतोलाई एक दंश दियो। बीषको असरले मुटु फुट्न आँटेको भ्यागुतोले सोध्यो, "किन गरेको मलाई यस्तो? मैले त तँलाई सहयोग गरेको थिएँ साथी।" बिच्छी त्यसपछि भन्छ, "सहयोग गर्दा साथी चिनेर गर्नु। मेरो चरित्र नै घाती छ भन्ने कुरा नबुझ्नु तेरो मुर्खता हो।"
कथामा नीहित नैतिक शिक्षाका बारेमा यो लेखकले पाठकलाई सत्संग दिनु आवश्यक छैन। तर कथा टुङ्गिएको पनि छैन।
त्यहि बिच्छी फेरि एकपटक नदीमा डुब्न लागेको थियो। एकजना सन्त त्यतिनै बेला नदीमा नुहाएर सूर्यलाई नमस्कार गर्दैथिए। आफ्नो अन्जुलीले पानी उठाउँदा उनले बिच्छी देखे। उनले बिच्छीलाई पाखामा सुरक्षित तरिकाले किनारा लगाए। अनि आफ्नो पुजा अर्चना गर्न थाले। बिच्छी फेरी आयो। उनले फेरि त्यो दुष्ट जीवलाई जोगाए। तर यसपटक सन्तको हातमा बिच्छीले एउटा डंक हान्यो। बिच्छी अलप भयो।
सन्त मुर्छित भए। उनका शिष्यहरू सन्तले आखिरी स्वास लिनेबेला आईपुगे। धर्मराउँदो स्वास्का बीच उनले भने, "बिच्छीले जे गर्नुथियो, त्यो उसले गर्यो ,मैले जे गर्नु थियो त्यो मैले गरें। यो बिच्छीको दोष होईन, त्यो उसको चरित्र थियो। दोष मेरो हो, उसलाई जोगाउनु मेरो संस्कार थियो। "
दुःख मान्ने कुरा छ, यो देशमा १५ हजार मान्छेले ज्यान गुमाएका छन्। त्यो त भयो भयो, आफ्नो ठाउँमा छ। अब अझ ३० हजारले ज्यान गुमाउनेवाला छ। यही गरिबी राख्नुहुन्छ, हुनेखानेलाई पोस्नु हुन्छ, यसरी नै हुनेखाने तस्करहरुको नाइके बन्नुहुन्छ र तिनलाई नै पक्षपोषण गर्नुहुन्छ भने अर्को ३० हजार मान्छे मर्छन्।
सत्तामा हुनेहरुलाई बन्दुकले जोगाएको छ। सेनाले जोगाएको छ, प्रहरीले जोगाएको छ। तर, गरिब, शोषक समान्तीका नाममा एकछाक भात खान पाउने मारिएको हो भने आज खै त परिर्वतन ? जनताले के पाए ? केही भएन। काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछ भनेजस्तै भयो। मलाई लागेको थिएन यस्तो होला भन्ने।
पूर्व प्रधान न्याधीश सुशीला कार्कीले बोलेका यी कुराले अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई छुनेछैन। ओली शायद सोच्छन, अबको पाँच बर्ष उनको अकन्टक साम्राज्य हो। गलत। भारत र चीनले उनलाई पुल्पुल्याएको भ्रम पाल्न उनी स्वतन्त्र छन्। तर यी दुवै मुलुकले मैलो जुत्ता लगाएर उनको मगज प्रदुषित गर्ने अभिप्रायमा उनी सचेत छैनन्। त्यसैले उनी आफ्नो मुलुकबासीलाई दुई तिहाईको दम्भ दिँदैछन।
तर डाक्टर गोविन्द केसी बिच्छीलाई हातमा बोकेर बचाउने एक सन्त हुन्। केपी ओली जनताका दावादारी गर्दा गर्दैपनि मार्सी चामलको भात खान गएका हुन्। यी मार्सी चामलका मालिक गोविन्द केसीले चलाएको सत्याग्रह बिरोधी व्यापारिक "माफिया" हुन्, जो बामपन्थी सिद्धांतलाई लाल पुँजीवादी अर्थशास्त्रमा अनुवाद गर्न खोज्दैछन।
उनका सहयात्री, सह अद्द्यक्ष पुष्प कमल दाहालको पातलिंदै गएको शक्तिलाई ओली आज आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्न सक्छन। भोली यसले बिष्फोटक रुप लिनेछ। ओली र प्रचण्डको स्वपनदृष्टि स्पस्ट छैन। सम्रीद्धीको नाममा आज को मोटाएको छ? पुष्पकमल दाहाल आफ्नी छोरीहरुका लागि करोडौंको घर किन्ने हैसियतमा कसरी पुगे? सरकारले यसबारेमा जनतालाई जानकारी दिने कि संस्कृत बिश्वबिध्यालयका पदाधिकारीलाई विमानस्थलबाट अपराधी झैं फर्काएर आफ्नो सत्ताको आभास दिने?
स्टालीन आफ्नो सभामा आधा घन्टासम्म गीत गाउँथे।ओली उखान टुक्का सुनाउंछन्। अन्तर्य एउटै हो। ओलीको जगजगी कायम रहला।
बामपन्थीहरु जन्मजात बीच्छी हुन्। यीनीहरु मौकामा आफ्नैलाई लाई दनक हान्छन। बामदेव गौतमको हविगत अहिले के छ? उनले ओलीलाई पार्टी प्रमुख बनाउन माधव नेपाललाई लंगौटीको गन्ध चखाएको होईन र?
आज बामदेव भन्दा माधव र ओली नजीक छन्। बुझ्नेलाई आगामी चुनावमा टिकट पक्का।
स्टालीनको मृत्यु पछि सर्वोच्च पदमा पुगेका नीकिता ख्रुस्चेव स्टालीनको आलोचना गर्दैथिए। "उनले यो गर्नु पर्ने थियो, त्यो गर्नुपर्ने थियो। उनले गरेनन। यसको मूल्य अब हामीले चुकाउनुपर्नेछ।" आदि ईत्यादि। बीचैमा भीडबाट एउटा कार्यकर्ता बोल्यो, "त्यतिबेला तपाईं चैं के हेरेर बस्नु भएको थियो कमरेड?"
नीकिता ख्रुस्चेव गर्जिए, "को हो त्यो बोल्ने? मेरो सामुन्ने आईज, मैले तँलाई जानेको छु, के गर्नुपर्छ। " कार्यकर्ताको भीडमा शुन्यता छायो। कोही अघि सरेन । अनि ख्रुच्शेवले बिस्तारै भने, "हेर्नुस, कमरेड, मेरो पनि त्यो बेलाको अवस्था तपाईं डराएको जस्तै थियो। "
तिम्रो अवस्था के छ मिष्टर ओली? तिमी को संग डराएका छौ? भारत? चीन? वा आफ्नै कार्यकर्ता कमरेड? वा नेपाली जनता?
राष्ट्रवादको आवरणमा उर्लेको गोरो अमेरिकी नश्लवाद!
म मरेपछि नरुनू
डिस्को, पव, दोहोरी साँझ, लाउन्ज बारमा १८ बर्ष भन्दा कम उमेरकाले प्रवेश गर्न नपाउने
शान्तिसुरक्षामा सरकार सफल : गृहमन्त्री थापा
28th Nov 2018 पिएसजे न्युज
काठमाडौँ, १२ मंसिर । अल्पायुमा नै आमाबुवा गुमाएपछि ७ बालबालिकाको विचल्ली भएको छ । सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिका २ किचेनखोलाका शसिक विक र शसिकला विकको मृत्यु भएपछि सात बालबालिकाको विचल्ली भएको हो ...
16th Dec 2018 पिएसजे न्युज
गुल्मी: गाडी मोहका कारण जनप्रतिनिधिहरु आलोचित बनिरहेका बेला गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले भने गाडी किन्ने पैसाले एम्बुलेन्स खरिद गरेको छ । जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो कार्यले स्थानीयवासी खुसी मात्र भएका छैनन्, जनप्रतिनिधिलाई ...
10th Jan 2019 पिएसजे न्युज
काठमाडाैं : राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अवकाशप्राप्त कर्मचारी लीलाप्रसाद श्रेष्ठले गृहजिल्ला पाँचथर छाडेको धेरै वर्ष भइसक्यो । दुई महिनाअघि उनको स्थायी ठेगाना फिदिम–३ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालय बबरमहलले एउटा पत्र पठायो । ...